February | 2014 | Myanmar Mp3 Album
ဇေယျာပြည့်ဖြိုး – အမတမျိုးစေ့ (ဓမ္မတေးများ) (2013) [Album]
Quality: 320kbps MP3 ၀၁။ ဗောဓိပင်နှင့်ရွှေပလ္လင် ၀၂။ အမတမျိုးစေ့ ၀၃။ ဓာတ်တော်ဝေခန်း ၀၄။ သုဝဏ္ဏသာမ ၀၅။ ဗုဒ္ဓသာသနာရောင် ၀၆။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ၀၇။ အောင်နိမိတ် ၀၈။ ရွှေတိဂုံသမိုင်း ၀၉။ ကျောင်းတော်ရာ [Download Whole Album] (Shared) [Download Whole Album] (Mediafire)
February 23, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဇေယျာပြည့်ဖြိုး Myanmar Artist Leaveacomment
ပိုးအိစံ – လွမ်းမပြေတဲ့နှောင်း (2013) [Album]
Quality: 320kbps MP3 ၀၁။ စောင်းလုလင် ၀၂။ နှောင်း ၀၃။ မဘက်လိုက်တော့မိုက်ဘက်ပါ ၀၄။ ဆောင်းမမ ၀၅။ ပပအနမ်း ၀၆။ နှလုံးသားချစ်သူ ၀၇။ သိလိုက်ပြီမေ ၀၈။ လွမ်းစိတ်သူ့ထံ ၀၉။ စစ်သည်တော်လွမ်းတေး ၁၀။ ကုသအလွမ်း [Download Whole Album] (Shared) [Download Whole Album] (Mediafire)
February 23, 2014 MMA အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ပိုးအိစံ Myanmar Artist Leaveacomment
VA – Master Thingyan (မာစတာသင်္ကြန်) (2014) [Album]
၀၁။ နှစ်သစ်ကူးတော့မယ် – Nine One & မိစန္ဒီ ၀၂။ အများနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ငါ – လွှမ်းပိုင် & Bobby Soxer ၀၃။ ရင်ခံတယ် – အေသင်ချိုဆွေ ၀၄။ သင်္ကြန် Barbie ရုပ် – ဂျောက်ဂျက် ၀၅။ ဒါမျိုးကြတတ်တယ် – ထွန်းရတီ ၀၆။ ဓာတ်လိုက်သည် – သားကြီး ၀၇။ တစ်ကြိမ်သာရသော – အိမ့်ချစ် ၀၈။ ဖိန့်ဖိန့်တုန် – ဆန်းသစ်လ ၀၉။ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် – ပူစူး ၁၀။ သုံးရက်ထဲပါ – မေသူ ၁၁။ ဖြူပြာနီဝါ – ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ သားစိုး [Download Whole … Continue Reading →
February 23, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
သက်ဆုနဒီ – အချစ်လွန်ရောဂါ (2014) [Album]
Quality: 320kbps MP3 ၀၁။ အေးဆေးပဲ (feat. ယုန်လေး) ၀၂။ အခုဘယ်မှာလဲပြော ၀၃။ ရလဒ် ၀၄။ အချစ်လွန်ရောဂါ (feat. ဇေရဲ) ၀၅။ သူစိမ်းစတိုင်လ် ၀၆။ လုံးဝမခွဲကြေး (feat. ဘိုလေး) ၀၇။ ယုံတမ်းစကား ၀၈။ အချစ်နာ ၀၉။ တောက်ချလိုက်မယ် (feat. ဇေရဲ) ၁၀။ အရာရာဖန်ဆင်းမလား ၁၁။ အတားအဆီး (feat. Jock) ၁၂။ နောက်ထပ်မလိမ်နဲ့ ၁၃။ တွေ့မယ် (feat. သားသား) ၁၄။ သူစိမ်းစတိုင်လ် (Bonus Track) [Download Whole Album] (Shared) [Download Whole Album] (Zippyshare)
February 23, 2014 MMA အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) သက်ဆုနဒီ Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
VA – သား​သား​နား​နား​သုံး​ရာသီ Volume # Two (2014) [Album]
VA – သား​သား​နား​နား​သုံး​ရာသီ Volume # One (2013) [Album] Here! Quality: 320kbps MP3 ၀၁။ အိပ်မက်မြို့ပျက် – Big Bag ၀၂။ ဒီဆောင်းတစ်ည- L လွန်းဝါ ၀၃။ အနမ်းနေ့ရက်များ – Gateway ၀၄။ မိုးနဲ့အတူ – သားကြီး ၀၅။ မူယာမာယာမိုး – မင်းမင်းလတ်၊ အနဂ္ဂ၊ သံသာဝင်း ၀၆။ ဖက်ထားပါ – မိစန္ဒီ ၀၇။ နှင်းဝေတဲ့ဆောင်း – စန္ဒီမြင့်လွင်၊ နီနီခင်ဇော် ၀၈။ ကြိုပါဦးကွယ် – အစ္စဏီ ၀၉။ အလွမ်းမိုးစက်များ – Too Big ၁၀။ မမုန်းမယ့်မိုး … Continue Reading →
ဆိုတေး – မင်္ဂလာပါ (2014) [Album]
Quality: 192kbps MP3 CDQ ၀၁။ မင်္ဂလာပါ ၀၂။ အဖြူရောင်အချစ် ၀၃။ ပြန်လာခဲ့ပါအခု ၀၄။ I Love You ၀၅။ အသစ်ကပြန်စချင်တယ် ၀၆။ မင်းတစ်ယောက်သာ ၀၇။ ပျော်သလိုနေတတ်တဲ့သူ ၀၈။ ရင်ခုန်လိုက်တိုင်း ၀၉။ ရေမြေခြား (feat. ဖြိုးAက) ၁၀။ ယုံပါချစ်သူ ၁၁။ သွားခေါလေး ၁၂။ ရည်းစား ၁၃။ အသစ်တွေ့ခဲ့ရင် [Downlaod Whole Album] (Shared) [Downlaod Whole Album] (Mediafire)
February 23, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဆိုတေး Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
VA – 9′ Night (2014) [Album]
Disc 1 – 320 kbps MP3 1-01. This Is YC – Yan Yan Chan 1-02. ဒီနေ့မှစ – Bunny Phyoe 1-03. ရော့ ယူလိုက် – ရသ၊ ဘိုလေး၊ ချမ်းအေးဝင်း 1-04. Ya Know It’s 2011 – YDNB 1-05. ဂျင်းတွေထည့် – J-Me, ကြက်ဖ၊ ချမ်းအေးဝင်း 1-06. တိမ်တိုက်များ – YDNB Disc2– 128kbps MP3 2-01. Thank you, Darling – ရဲရင့်အောင် 2-02. … Continue Reading →
February 23, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
Recycle – ဘဝရဲ့ဇာတ်ခုံ (2014) [Album]
Quality: 320kbps MP3 ၀၁။ ပြန်လာပါတော့​ ၀၂။ မပြီးဆုံးသောပြဇာတ် ၀၃။ ဘဝရဲ့​ဇာတ်ခုံ ၀၄။ နှောင်ကြိုး​ ၀၅။ သက်ဆုံး​ထိ ၀၆။ ​ရွှေမင်းသမီး​ ၀၇။ ချစ်လို့မမုန်းလိုက်ပါနဲ့​ ၀၈။ ရင်ခုန်သံစည်းချက် ၀၉။ မင်းတစ်ယောက်တည်း ၁၀။ ရပ်တန့်သွားသောနာရီ ၁၁။ ရန်ကုန် မန္တလေးအလွမ်း [Download Whole Album] (Shared) [Download Whole Album] (Zippyshare)
February 19, 2014 MMA အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) Media Myanmar Artist New Myanmar Albums Recycle Leaveacomment